05.11.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूलाई शान्ति र सुखको वर्सा दिन , तिम्रो स्वधर्म नै शान्त ि हो , त्यसैले तिमी शान्तिको लागि भड्किँदैनौ।”
अहिले तिमी बच्चाहरू २१ जन्मको लागि अखुट खजानाहरूमा तौलन योग्य बन्छौ, किन?
किनकि बाबाले जब नयाँ सृष्टि रच्नुहुन्छ, तब तिमी बच्चाहरू उहाँका सहयोगी बन्छौ। आफ्नो सबै कुरा उहाँको कार्यमा सफल गर्छौ। त्यसैले बाबाले त्यसको बदलामा २१ जन्मको लागि तिमीलाई अखुट खजानामा यस्तो तौल गर्नुहुन्छ, जहाँ कहिल्यै धन पनि कम हुँदैन, दु:ख पनि आउँदैन, अकालमा मृत्यु पनि हुँदैन।
मुझ को सहारा देने वाले.......
प्यारा रूहानी बच्चाहरूलाई ओम्को अर्थ त सुनाइएको छ। कसै कसैले केवल ओम् भन्छन्, तर ओम् शान्ति भन्नुपर्छ। केवल ओम्को अर्थ निस्कन्छ ओम् भगवान। ओम् शान्तिको अर्थ हो म आत्मा शान्त स्वरूप हुँ। म आत्मा हुँ, यो मेरो शरीर हो। पहिला हुन्छ आत्मा, पछि हुन्छ शरीर। आत्मा शान्त स्वरूप छ, उसको निवास स्थान हो शान्तिधाम। बाँकी कुनै जंगलमा जानाले सच्चा शान्ति मिल्दैन। सच्चा शान्ति मिल्छ नै तब, जब घर जान्छौ। मानिसहरूले शान्ति चाहन्छन्, जब अशान्ति हुन्छ। यो अशान्तिको दु:खधाम विनाश हुन्छ फेरि शान्ति हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई शान्तिको वर्सा मिल्छ। त्यहाँ न घरमा, न बाहिर राजधानीमा अशान्ति हुन्छ। त्यसलाई शान्तिको राज्य भनिन्छ, यहाँ छ अशान्तिको राज्य किनकि रावण राज्य हो। त्यो हो ईश्वरले स्थापना गरेको राज्य। फेरि द्वापरपछि आसुरी राज्य हुन्छ, असुरलाई कहिल्यै शान्ति हुँदैन। घरमा, दोकानमा जहाँतहीँ अशान्ति नै अशान्ति हुन्छ। ५ विकाररूपी रावणले अशान्ति फैलाउँछ। रावण के चीज हो, यो कुनै पनि विद्वान, पण्डित आदिले जानेका छैनन्। बुझेका छैनन्– हामीले वर्ष वर्ष रावणलाई किन मार्छौं। सत्ययुग-त्रेतामा यो रावण हुँदैन। त्यो हो नै दैवी राज्य। ईश्वर बाबाले दैवी राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ, तिमीहरूद्वारा। एक्लै गर्नुहुन्न। तिमी प्यारा बच्चाहरू ईश्वरका सहयोगी हौ। पहिला रावणका सहयोगी थियौ। अहिले ईश्वर आएर सबैको सद्गति गरिरहनु भएको छ। पवित्रता, सुख, शान्तिको स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। सत्ययुग-त्रेतामा दु:खको कुरा हुँदैन। कसैले गाली आदि दिँदैन, गन्दा कुरा खाँदैनन्। यहाँ त हेर कति गन्दा कुरा खान्छन्। देखाउँछन्– कृष्णलाई गाई धेरै प्यारो लाग्थ्यो। यस्तो होइन, कृष्ण कुनै ग्वाला थिए, गाईको पालना गर्थे। होइन, त्यहाँका गाई र यहाँका गाईमा धेरै फरक छ। त्यहाँका गाई सतोप्रधान, धेरै सुन्दर हुन्छन्। जसरी देवताहरू सुन्दर त्यस्तै गाईहरू। देख्दा मात्र पनि दिल खुसी हुन्छ। त्यो हो नै स्वर्ग। यो हो नर्क। सबैले स्वर्गलाई याद गर्छन्। स्वर्ग र नर्कमा रात दिनको फरक छ। रातमा हुन्छ अँध्यारो, दिनमा हुन्छ उज्यालो। ब्रह्माको दिन मतलब ब्रह्मा वंशीहरूको पनि दिन हुन जान्छ। पहिला तिमी पनि घोर अन्धकारमा थियौ। यस समय भक्तिको कति जोड छ, महात्मा आदिलाई सुनमा तौल गरिरहन्छन् किनकि शास्त्रका धेरै विद्वान् छन्। उनीहरूको प्रभाव यति धेरै किन छ? यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ। वृक्षमा नयाँ नयाँ पात सतोप्रधान हुन्छन्। माथिबाट नयाँ आत्मा आउँदा अवश्य उसको प्रभाव हुन्छ नि, अल्पकालको लागि। सुन अथवा हीरामा तौल गर्छन्, तर यो त सबै समाप्त हुन्छ। मनुष्यसँग कति लाखौंका भवन छन्। सम्झन्छन्, हामी त धेरै धनवान हौं। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– यो धन बाँकी थोरै समयको लागि हो। यो सबै माटोमा मिल्छ। किनकि दबी रही धूल में... बाबाले स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, यसमा जसले लगाउँछ उसलाई २१ जन्मको लागि हीरा जुहारतको महल मिल्छ। यहाँ त एक जन्मको लागि मिल्छ। त्यहाँ तिम्रो २१ जन्म चल्छ। यी आँखाले जे जति देख्छौ, शरीरसहित सबै भस्म हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई दिव्य दृष्टिद्वारा साक्षात्कार पनि हुन्छ। विनाश हुन्छ फेरि यी लक्ष्मी-नारायणको राज्य हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ– हामीले आफ्नो राज्य भाग्य फेरि स्थापना गरिरहेका छौं। २१ पीढी राज्य गर्यौं फेरि रावणको राज्य चल्यो। अब फेरि बाबा आउनु भएको छ। भक्ति मार्गमा सबैले बाबालाई नै याद गर्छन्। गायन पनि छ– दु:ख में सिमरण सब करे...। बाबाले सुखको वर्सा दिनुहुन्छ, फेरि याद गर्ने आवश्यकता रहँदैन। तिमी माता-पिता... अब ती त हुन् आफ्ना बच्चाहरूका माता-पिता। यो हो पारलौकिक माता-पिताको कुरा। अहिले तिमीले यी लक्ष्मी-नारायण बन्नको लागि पढ्छौ। विद्यालयमा बच्चाहरू राम्ररी पास भए भने फेरि टिचरलाई इनाम दिन्छन्। अब तिमीले उहाँलाई के इनाम दिन्छौ! तिमीले त उहाँलाई आफ्नो बच्चा बनाउँछौ, जादुगरीद्वारा। देखाउँछन्– कृष्णको मुखमा आमाले देखिन्– मक्खनको गोला। अब कृष्णले त जन्म लिए सत्ययुगमा। उनले मक्खन आदि खाँदैनन्। उनी त हुन् विश्वको मालिक। यो कुन समयको कुरा हो? तिमीलाई थाहा छ– हामी यो शरीर छोडेर गएर बच्चा बन्छौं। विश्वको मालिक बन्छौं। दुवैथरी क्रिश्चियनहरू आपसमा लडाईं गर्छन् र मक्खन मिल्छ तिमी बच्चाहरूलाई। राजाई मिल्छ नि। जसरी उनीहरूले देशलाई लडाएर मक्खन आफैंले खाए। क्रिश्चियनको राजधानी पौने भागमा थियो। पछि बिस्तारै बिस्तारै छुट्दै गयो। सारा विश्वमा तिमी बाहेक अरू कसैले राज्य गर्न सक्दैन। तिमी अहिले ईश्वरीय सन्तान बनेका छौ। अहिले तिमी ब्रह्माण्डको मालिक र विश्वको मालिक बन्छौ। विश्वमा ब्रह्माण्ड आउँदैन। सूक्ष्मवतनमा पनि राजाई छैन। सत्ययुग-त्रेता.... यो चक्र यहाँ स्थूल वतनमा हुन्छ। आत्मा कहीं ध्यानमा जाँदैन। आत्मा निस्किएर गयो भने शरीर खत्तम हुन्छ। यी सबै हुन् साक्षात्कार, रिद्धि-सिद्धिद्वारा पनि यसरी नै साक्षात्कार हुन्छ, जसद्वारा यहाँ बसेर बेलायतको संसद भवन आदि देख्न सक्छन्। बाबाको हातमा फेरि छ दिव्य दृष्टिको चाबी। तिमीले यहाँ बसेर लन्डन देख्न सक्छौ। औजार आदि केही छैन जसलाई किन्न परोस्। ड्रामा अनुसार त्यसै समयमा त्यो साक्षात्कार हुन्छ, जो ड्रामामा पहिला नै निश्चित छ। जसरी देखाउँछन्– भगवानले अर्जुनलाई साक्षात्कार गराउनु भयो। ड्रामा अनुसार उनलाई साक्षात्कार हुनु थियो। यो पनि निश्चित छ। कसैको बढाईं होइन। यो सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ। कृष्ण विश्वको राजकुमार बन्छन्, मतलब मक्खन मिल्छ। यो पनि कसैले जान्दैन– विश्व केलाई, ब्रह्माण्ड केलाई भनिन्छ। ब्रह्माण्डमा तिमी आत्माहरू निवास गर्छौ। सूक्ष्मवतनमा आउने-जाने, साक्षात्कार आदि यस समयमा हुन्छ फेरि ५ हजार वर्ष सूक्ष्मवतनको नाम हुँदैन। भनिन्छ– ब्रह्मा देवता नम:, फेरि भन्छन्– शिव परमात्माए नम:। त्यसैले सबैभन्दा उच्च हुनु भयो नि। उहाँलाई भगवान भनिन्छ। ती देवताहरू हुन् मनुष्य, तर दैवी गुणवाला हुन्। बाँकी ४-८ हात भएका मनुष्य हुँदैनन्। त्यहाँ पनि २ हात भएका नै मनुष्य हुन्छन्, तर सम्पूर्ण पवित्र, अपवित्रताको कुरा हुँदैन। अकालमा मृत्यु कहिल्यै हुँदैन। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनु पर्छ। हामी आत्माले यस शरीरद्वारा बाबालाई त देखौं। देखिनमा त शरीर आउँछ, परमात्मा अथवा आत्मालाई त देख्न सकिँदैन। आत्मा र परमात्मालाई त जान्ने कुरा हो। देख्नको लागि दिव्य दृष्टि मिल्छ। अरू सबै चीज दिव्य दृष्टिद्वारा भव्य देखिन्छ। राजधानी भव्य देखिन्छ। आत्मा त छ नै बिन्दु। बिन्दुलाई देखेर मात्रै त तिमीले केही पनि बुझ्दैनौ। आत्मा त धेरै महीन छ। धेरै डाक्टर आदिले कोसिस गरे आत्मालाई समात्न, तर कसैलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूलाई त सुन, हीरामा तौल गर्छन्। तिमी जन्म जन्मान्तर पदमपति बन्छौ। तिम्रो अलिकति पनि बाहिरी शो छैन। साधारण तरिकाले यस रथमा बसेर पढाउनु हुन्छ। उहाँको नाम हो भागिरथ। यो हो पतित पुरानो रथ, जसमा बाबा आएर उच्च भन्दा उच्च सेवा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो त आफ्नो शरीर छैन। म जो ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर... हुँ, अब तिमीलाई वर्सा कसरी दिन्छु! माथिबाट दिन्नँ। के प्रेरणाद्वारा पढाउँछु? अवश्य आउनु पर्छ नि। भक्ति मार्गमा मलाई पुज्छन्, सबैको प्यारो हुँ। गान्धी, नेहरूको चित्र प्यारो लाग्छ, उनीहरूको शरीरलाई याद गर्छन्। आत्मा जो अविनाशी छ, उसले गएर अर्को जन्म लियो। बाँकी विनाशी चित्रलाई याद गर्छन्। त्यो भूत पूजा भयो नि। समाधी बनाएर त्यसमाथि फूल आदि चढाउँछन्। यो हो यादगार। शिवका कति मन्दिर छन्, सबैभन्दा ठूलो यादगार शिवको छ नि। सोमनाथ मन्दिरको गायन छ। मुहम्मद गजनवीले आएर लुटेको थियो। तिमीसँग यति धेरै धन हुन्थ्यो। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई रत्नमा तौल गर्नुहुन्छ। स्वयंलाई तौल गराउँदिनँ। म यति धनवान बन्दिनँ, तिमीलाई बनाउँछु। उनीहरूलाई त आज तौल गर्यो, भोलि मर्छन्। धन कुनै काममा आउँदैन। तिमीलाई त बाबा अखुट खजानामा यस्तो तौल गर्नुहुन्छ जो २१ जन्मसम्म साथ रहन्छ। यदि श्रीमतमा चल्यौ भने त्यहाँ दु:खको नाम हुँदैन, कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। मृत्युसँग डराउँदैनौ। यहाँ कति डराउँछन्, रुन्छन्। त्यहाँ कति खुसी हुन्छ, गएर राजकुमार बन्छु। जादुगर, सौदागर, रत्नागर– यो शिव परमात्मालाई भनिन्छ। तिमीलाई पनि साक्षात्कार गराउँछु, यस्तै राजकुमार बन्छौ। आजकल बाबाले साक्षात्कारको पार्ट बन्द गरिदिनु भएको छ। नोक्सान हुन्छ। अहिले बाबाले ज्ञानद्वारा तिम्रो सद्गति गर्नुहुन्छ। तिमी पहिला जान्छौ सुखधाममा। अहिले त छ दु:खधाम। तिमीलाई थाहा छ– आत्माले नै ज्ञान धारणा गर्छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै असल वा खराब संस्कार हुन्छन्। यदि शरीरमा भए त शरीरका साथै संस्कार भस्म हुने थिए। तिमीले भन्छौ– शिवबाबा, हामी आत्माहरूले पढ्छौं यस शरीरद्वारा। नयाँ कुरा छ नि। हामी आत्माहरूलाई शिवबाबाले पढाउनु हुन्छ। यो त पक्का पक्का याद गर। हामी सबै आत्माहरूको उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ– मेरो आफ्नो शरीर छैन। म पनि हुँ आत्मा, तर मलाई परमात्मा भन्छन्। आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। बाँकी शरीरको नाम बदलिन्छ। आत्मा त आत्मा नै हो। म परम आत्मा तिमीले जस्तो पुनर्जन्म लिन्नँ। ड्रामामा मेरो पार्ट नै यस्तो छ, म यिनमा प्रवेश गरेर तिमीलाई ज्ञान सुनाइरहेको छु, त्यसैले यिनलाई भाग्यशाली रथ भनिन्छ। यिनलाई पुरानो जुत्ता पनि भनिन्छ। शिवबाबाले पनि पुरानो लंग बूट लगाउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले यिनमा धेरै जन्मको अन्त्यमा प्रवेश गरेको छु। सबैभन्दा पहिला यी बन्छन् तत् त्वम्। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी त जवान हौ। मैले भन्दा धेरै पढेर उच्च पद पाउनु पर्छ, तर मसँग बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई घरी-घरी उहाँको याद आउँछ। बाबा मसँग सुत्नु पनि हुन्छ, तर बाबाले मलाई अंकमाल गर्न सक्नुहुन्न। तिमीलाई अंकमाल गर्नुहुन्छ। तिमी भाग्यशाली हौ नि। शिवबाबाले जो शरीर लोन लिनु भएको छ तिमीले उहाँलाई अंकमाल गर्न सक्छौ। मैले (ब्रह्मा बाबा) कसरी गरुँ! मलाई त यो पनि भाग्यमा छैन त्यसैले तिमीलाई भाग्यशाली सितारा गायन गरिएको छ। बच्चाहरू जहिले पनि भाग्यमानी हुन्छन्। पिताले बच्चाहरूलाई सम्पत्ति दिन्छन्। त्यसैले तिमी लक्की सितारा ठहरियौ नि। शिवबाबा पनि भन्नुहुन्छ– तिमी म भन्दा लक्की हौ, तिमीलाई पढाएर विश्वको मालिक बनाउँछु, म कहाँ बन्छु र। तिमी ब्रह्माण्डको पनि मालिक बन्छौ। बाँकी मसँग दिव्य दृष्टिको चाबी छ। म ज्ञानको सागर हुँ। तिमीलाई पनि मास्टर ज्ञान सागर बनाउँछु। यस सारा चक्रलाई जानेर तिमी चक्रवर्ती महाराजा-महारानी बन्छौ। म कहाँ बन्छु र। वृद्ध भएपछि बच्चाहरूलाई सुम्पिएर स्वयं वानप्रस्थमा जान्छन्। पहिला यस्तो हुन्थ्यो। आजकल त बच्चाहरूमा मोह हुन्छ। पारलौकिक बाबा भन्नुहुन्छ– म यिनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई काँडाबाट फूल, विश्वको मालिक बनाएर, आधाकल्पको लागि सदा सुखी बनाएर वानप्रस्थमा बस्छु। यी सबै कुरा शास्त्रमा कहाँ छन् र! संन्यासी, वैरागीले शास्त्रका कुरा सुनाउँछन्। बाबा त ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। स्वयं भन्नुहुन्छ– वेद शास्त्र आदि सबै भक्ति मार्गका सामग्री हुन्। ज्ञान सागर त म नै हुँ। अच्छा!
१) यी आँखाद्वारा शरीर सहित, जे जति देखिन्छ, ती सबै भस्म भएर जानु छ त्यसैले आफ्नो सबैथोक सफल गर्नु छ।
२) बाबाबाट पूरा वर्सा लिनको लागि पढाइ पढ्नु छ। सदा आफ्नो भाग्यलाई स्मृतिमा राखेर ब्रह्माण्ड वा विश्वको मालिक बन्नु छ।
मायाको रोयल रूपको बन्धनबाट मुक्त , विश्वजित , जग तजित भव
मेरो पुरुषार्थ, मेरो आविष्कार, मेरो सेवा, मेरो टचिंग, मेरो गुण राम्रो छ, मेरो निर्णय शक्ति धेरै राम्रो छ– यो मेरोपन नै रोयल मायाको रूप हो। मायाले यस्तो जादु मन्त्र गरिदिन्छ जसले तेरोलाई पनि मेरो बनाइदिन्छ। त्यसैले अब यस्ता अनेक बन्धनहरूबाट मुक्त बनेर एक बाबाको सम्बन्धमा आऊ तब मायाजित बन्छौ। मायाजित नै प्रकृतिजित, विश्वजित वा जगतजित बन्छन्। उनीहरूले नै एक सेकेन्डको अशरीरी भवको डाइरेक्सनलाई सहजै र स्वत: कार्यमा लगाउन सक्छन्।
विश्व परिवर्तक ऊ नै हो, जसले कसैको नेगेटिभलाई पोजिटिभमा बदलिदिन्छ।